खैरहनीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँछौँ – Chitwan Post
खैरहनीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँछौँ
प्रकाशित मिति: आइतवार, साउन ६, २०७५
साविक चैनपुर, कठार, कुमरोज र खैरहनी गाविस समायोजन गरी खैरहनी नगरपालिका स्थापना भएको हो । राप्ती र रत्ननगर नगरपालिकाको बीचमा अवस्थित यो नगरपालिका निकुञ्जको सिमानामा जोडिएको छ । निकुञ्जसँग जोडिएका सामुदायिक वनहरु रहेकाले यो नगरपालिकाले पर्यटकीय सम्भावनासमेत बोकेको छ । मुलुककै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहासँग जोडिएको यो नगरपालिकाभित्र रहेको कुमरोज सामुदायिक वनले पूर्वाधार निर्माण गरेर सौराहा आउने पर्यटकलाई खैरहनी ल्याउन सफल भएको छ । यो कार्यमा नगरपालिकाले समेत सहकार्य गरेको छ । खैरहनीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउन थालेपछि यहाँ होमस्टे र ठूला होटलहरु खुल्न थालेका छन् । पर्यटनको हिसाबले यो नगरपालिकाले गति लिन थालेको छ । खैरहनी नेपालकै मुख्य बाली धान उत्पादनको हिसाबले पनि अब्बल मानिँदै आएको छ । खैरहनी नगरपालिकामा बाह्मण, क्षेत्री, थारु, तामाङ, नेवार र मुसहर समुदायको बसोवास छ । अधिकांश नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । १३ वटा वडा रहेको यस नगरपालिकाको जनसंख्या ६७ हजार २७५ रहेको छ ।
खैरहनी नगरपालिकाको विगत एक वर्षको कार्यसम्पादन कस्तो छ, नगरपालिकाले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेको छ कि छैन ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर चितवन पोष्ट दैनिकले खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख लालमणि चौधरी, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति शशी खनिया र खैरहनी उद्योग वाणिज्य संघका निवर्त मान अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको थियो, प्रस्तुत छ सोही कुराकानी :
(मेयर, खैरहनी नगरपालिका)
१) एक वर्षको दौरानमा मुख्य काम के–के भए, तीमध्ये तपाईंलाई मह¤वपूर्ण लागेका तीन कार्यहरु के–के हुन् ?
– हामी निर्वाचित भएर आएपछि सुरूमा हामीले कार्यालय व्यवस्थापनको काम सुरू ग¥यौँ । प्रशासनिक कार्य सुधार गरेपछि हामीले ध्यान नगरपालिकाको विकास निर्माणमा केन्द्रित गरेका हौँ । इन्टरनेटबाट वडामा घटना दर्तासँगै थुप्रै सुधारका काम गरेका छौँ । हाम्रै पहलमा खैरहनीमा पहिलोपटक कृषि क्याम्पस ल्याउन सफल भएका छौँ, जुन खैरहनीमा आवश्यक थियो । पर्यटनमार्फत स्थानीय जनताको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले खैरहनीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम सुरू गरेका छौँ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले ठूलो लगानी गरेका छौँ । सौराहालाई कुमरोज, कठार हुँदै कंकालीसम्म जोड्ने योजनाअनुरुप काम भएको छ । कंकाली डाँडालाई व्यवस्थित गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भिœयाउने योजनाअनुरुप काम भइरहेको छ । दुग्ध उत्पादनको वृद्धि र बजारीकरणका लागि साउथ एसिया फाउन्डेसन र भारतको अमूल डेरीको सहकार्यमा नगरपालिकाद्वारा डेरी उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ । पूर्वाधार विकासतर्फ १० किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्न सफल भएका छौँ । ५ किलोमिटर ढल निर्माण, ५ वटा कल्भर्ट निर्माण, मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कठार र कुमरोजमा ४५ लाखको विद्युतीय तारबार गरेका छौँ । कृषि र पशुको विकासका लागि हालै करिब १ करोडको कृषि औजार र पशु विकासका लागि अनुदान वितरण गरेका छौँ । कृषि औजार वितरण देशभरकै नगरपालिकामध्ये नमुना नगरका रुपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार काम गरेका छौँ । ५ बिगाहा सार्वजनिक जग्गासमेत संरक्षण गरिएको छ ।
२) खैरहनीमा फोहोर व्यवस्थापनको काम हुन सकेन भनेर नगरवासीबाट गुनासो आइरहेको छ नि ?
– फोहोर व्यवस्थापनको काम नभएको होइन, भइरहेको छ । तर पनि फोहोर व्यवस्थापनको काम हाम्रो नगरपालिकालाई चुनौतीको विषय बनेको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइड निर्माणको काम भइरहेको छ । तत्कालका लागि फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति एक निजी संस्थासँग शुल्कमा आधारित फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरू गरेका छौँ । दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको काम यही आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने योजना छ ।
३) यो एक वर्षमा प्रमुख चुनौतीहरु के–के रहे ?
– काम गर्दा चुनौती आइपर्छ । हामीलाई सबै दल, पेसाकर्मी, उद्योगी व्यवसायीहरुको साथले धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्न परेन । तैपनि, २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गरेर विकासको मूलधारमा ल्याउन हामीले चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । कर्मचारीले चलाएको नगरपालिकाको आर्थिक पारदर्शिता, विकासको मोडल सुधारका लागि केही चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । त्यो सामान्य विषय हो ।
४) योजना छनोट पहँुचको आवश्यकताको आधारमा हुन सक्यो या सकेन ? योजना छनोटमा स्थानीय जनताको सहभागिता कस्तो रह्यो ?
– हामी निर्वाचित भएर आएलगत्तै योजना बनाएर काम सुरू गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आइप¥यो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को योजना बनाउँदा हामीले नगरवासीहरुसँग सल्लाहा, सुझाव लिन पाएनौँ । आवश्यकताको आधारमा योजना बनाएर काम ग¥यौँ । केही बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी र व्यवसायीहरुको सल्लाहबमोजिम कार्ययोजना बनाएर बजेट विनियोजन गरेका हौँ । तर, कामै नलाग्ने कुरामा खर्च गरिएछ भन्ने भएको छैन । अबको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को योजना नगरवासीको सुझावका आधारमा बनाएका छौँ । नगरको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर तेस्रो नगरसभाबाट पारितसमेत गरिसकेका छौँ ।
५) प्राप्त बजेटको कति प्रतिशत खर्च भयो ?
– हाम्रो नगरपालिकामा काम नभएर बजेट फ्रिज हुने अवस्था छैन । विनियोजित बजेटअनुसार समयमै काम भएको छ । हामीले शतप्रतिशत काम गर्न सफल भयौँ ।
६) भएका कामहरुको सामाजिक लेखापरीक्षण भयो कि भएन ?
– सामाजिक लेखापरीक्षण भएको छैन । हामीले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छौँ । सामाजिक लेखापरीक्षण गराउने तयारी गरेका छौँ ।
७) प्रतिपक्षी, स्थानीय पेसागत र सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहयोग कस्तो रह्यो ?
– हाम्रो नगरपालिकामा प्रतिपक्षी नै छैन । राजनीतिक दलहरुको पनि भरपूर सहयोग हामीलाई छ । नगरको विकास र समृद्धिका लागि मैले पेसाकर्मी र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग सुझाव लिएर काम गर्ने गरेको छु ।
८) नगरपालिकाको कार्यमा अरु दलको भूमिका सकारात्मक रह्यो या रहेन ?
– सबै दलका नेताहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । नगरको विकासका लागि हामीले पनि दलहरुसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढेका छौँ । नगरको योजना निर्माणसहित नीतिगत निर्णय दिँदा मैले पनि दलहरुको सहयोग लिने गरेको छु । नगर हामी सबैको साझा अण्डा हो । सबै दलहरुले अपनत्व फिल गरेर हामीलाई सहयोग गरेका छन् ।
९) चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने प्रमुख योजनाहरु के–के छन् ?
– हामीले नगरसभा सकेका छौँ । नगरसभाबाट समृद्धिका योजना पारितसमेत भइसकेका छन । खैरहनीमा अस्पताल, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि निकुञ्ज र बस्तीको सिमानामा पर्खाल लगाउने, फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइड निर्माण र पर्यटकीय पूर्वाधारलाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ । हामी खैरहनीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने छौँ । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएर बजेट विनियोजन गरेका छौँ । त्यसका अलावा, सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हामीले लगानी गरेका छौँ ।
१०) समग्रमा एक वर्षको उपलब्धिलाई १० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
– नगरवासीको अपेक्षाअनुसार नै हामीले काम गरेका छौँ । हामी ८ नम्बर दिन्छौँ ।
जनअपेक्षाअनुसार काम भएन : शशी खनिया
(सभापति, नेपाली कांग्रेस खैरहनी नगर समिति)
१. तपाईंको नगरपालिकाको १ वर्षको स्थानीय शासनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खासै उल्लेखनीय उपलब्धि भएको देखिँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यमा अलमलजस्तो देखिन्छ । आफूले भोट हालेर जिताएको अनुुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् ।
२. नगरपालिकाले भनेका प्रमुख कार्यहरुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– एक वर्षको अवधिमा केही पनि नयाँ काम हुन सकेको छैन, सबै पुरानै कामको निरन्तरता हो । खैरहनी नगरपालिका नयाँ नगरपालिका भए पनि स्थानीय निर्वाचन हुनुअघि सर्वदलीय सहकार्यले टोलसुधार गठन भई कतिपय टोलसुधार वातावरणमैत्री घोषणा भइसकेका थिए । एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय करहरुको विषयमा जनधारणा लिइसकेको जग्गा र हाल भएको भवन तयार भइसकेको छ । निर्वाचन हुनुअघि नै सडकहरु अधिकांश कालोपत्रे भइसकेका छन् । सामुदायिक वनमार्फत पर्यटक आकर्षण गर्ने कार्यक्रमहरु अगाडि बढिसकेका छन् । विद्यालयहरुमा नगरपालिकाको लगानीमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइसकेका छन् । सिंचाइको बोरिङका कामहरु, खानेपानी, सोलार बत्ती, मुख्य बजार क्षेत्र सरसफाइ गर्ने काम, गौचरणलगायतका जग्गाहरु नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने, तालतलैयाहरु व्यवस्थापन गर्नेजस्ता आधारभूत कुराहरु पहिला नै भइसकेकाले गर्दा हालको स्थिति सर्वदलीय समितिकै पालामा भएकाले स्थानीय निर्वाचनपछि खासै काम भएको छैन ।
३. योजना छनोट र नगरपालिकाको समग्र गतिविधिमा तपाईंलगायत अरु दलको सहभागिता कस्तो रह्यो ?
– योजना छनोटमात्र होइन, कुनै पनि गतिविधिमा दलहरु भनेर नगरपालिकाले समावेश गराएको छैन । अन्य दलको हकमा म भन्न सक्दिनँ, तर नेपाली कांग्रेसले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत खबरदारी गरी नगरको हितका लागि काम गरेको छ ।
४. के योजना छनोट पहुँच र दलीय फाइदाभन्दा आवश्यकताअनुसार भइरहेको छ ? यदि छैन भने केही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?
– यो वर्षको सन्दर्भमा हेर्न बाँकी नै छ, तर विगत वर्षलाई हेर्ने हो भने कतिपय वडामा पठाइएको बजेट आफ्नो अनुकूल पठाइएको देखिन्छ । नगरस्तरीय कतिपय बजेट सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षलाई समेत थाहा दिइएन । व्यक्तिगत, खुसामत, पहुँचको आधारमा बजेट वितरण भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण गत सालको भुक्तानी हेर्दा छर्लंग हुन्छ ।
५. नगरपालिकामा आर्थिक भ्रष्टाचार भएको पाउनुभएको छ ? यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयासहरु भएका छन् ?
– भ्रष्टाचार केलाई भन्ने ? कम्प्युटर सिस्टममा अधिकांश वडा र नगरका कार्यहरु लान सकिएको छैन, कार्बनकै भरमा चलेको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर अत्यन्तै महँगो छ । गाविसबाट नगरपालिका भए पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, जुन कुरा तपाईं गाउँबस्तीका जनतासँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ । उपभोक्ता समितिले काम गर्ने भनेर बनाइएको ठाउँमा त्यो हुन सकिराखेको छैन । अनुगमन पूर्वाग्रही भयो भनेर जनगुनासो छ । नयाँ नगरपालिका हो, बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जाला ।
६. आगामी वर्षका योजना र नगरपालिकाका गतिविधिमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
– आगामी वर्षमा नगरपालिकामा यस नगर क्षेत्रभित्र रहेका बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलहरु तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग रायसल्लाह लिई नगरपालिकाबाट दूरदराजमा बस्ने लक्षित वर्गलाई समेट्ने खालको बजेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । कतिपय नगरस्तरीय योजना दीर्घकालीनरुपमा नगरको हित गर्ने खालको, बजार क्षेत्र सरसफाइ गर्ने खालका, पर्यटकको वृद्धि, शिक्षा र रोजगारी सृजना गर्ने र यहाँका थारु, दराई, जनजाति र दलित वर्गलाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
७. समग्र १ वर्षको उपलब्धिलाई १० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
– उपलब्धि कति नं को भयो भन्नुभन्दा पनि विगत वर्षहरुको निरन्तरता भयो कि भएन भन्ने कुरा हो । खासै नम्बरमा भन्न मिल्ने काम भएको छैन ।
जनताले विकासको अनुभूति गरेका छन् : गुणराज श्रेष्ठ
(निवर्तमान अध्यक्ष, खैरहनी उद्योग वाणिज्य संघ)
१) तपाईले नगरपालिकाको एक वर्षको स्थानीय शासनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन लामो समयपछि भएको हुँदा आमसर्वसाधारणले धेरै उत्साह र अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । कर्मचारीहरुले चलाएको स्थानीय निकायभन्दा आफूले नै मतदान गरी बनाएका जनप्रतिनिधि पाउँदा सुखानुभूति गरेका नागरिकमा थोरै निराशा छाएको छ । स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा स्रोत र साधनको अभाव, समन्वयको कमी, स्रोतसाधनको सही उपयोग र परिचालन नभएका कारण नगरपालिकाले अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणमा गति लिन सकेको छैन । अब नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, सडक, पुल, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा लगानी बढाएर एकचित्त भएर काम गर्नुपर्छ ।
२) नगरपालिका र विपक्षी दलको भनाइप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
– नगरको विकासमा विपक्षी दलहरुले पनि नगरपालिकालाई रचनात्मक सहयोग गरेको मैले पाएको छु । नगरको समृद्धिका लागि सबैले नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्छ । हामी व्यवसायीहरुले पनि नगरपालिकालाई सहयोग गर्दै आएका छौँ ।
३) के स्थानीय जनताले एक वर्षका बीचमा परिवर्तनको आभास गर्न सके ?
– एक वर्षका बीचमा जनताले निश्चय पनि परिवर्तनको महसुस गरेका छन् । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार आएको छ । स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, खानेपानीजस्ता धेरै कार्यालय आएका छन् । यी सबै निकायले आफ्नो स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै नगरवासीलाई नगरपालिका हाम्रै हो, हाम्रै लागि हो भन्ने अनुभूति गराएको छ ।
४) नगरवासीलाई आफ्नो कुरा राख्न सहज वातावरण बनेको पाउनुभएको छ ?
– आफ्नै जनप्रतिनिधि भएका कारण जनताले निर्धक्कसँग कुरा राख्न सकेको महसुस गरेको छु । वडा सदस्यदेखि नगरप्रमुखसम्म जनताले सहजरुपमा आफ्ना समस्या राख्न सकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरुले पनि जनताको कुरा सुन्ने सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
५) एक वर्षको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा तपाईं नगरपालिकाको सुशासन र विकास लक्ष्य पच्छ्याउनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
एक वर्षको कामको मूल्याङ्कन हेर्दा हामी आशावादी छौँ । स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालमा भर्खर एक वर्षमात्र बितेको छ । अब चार वर्ष बाँकी छ । बाँकी अवधि नगरपालिकाले समग्र नगरको विकास निर्माणमा गुरूयोजना तयार गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु तय गरी समृद्ध नगर बनाउनुपर्छ । नगरपालिकाले साना–साना योजनामा बजेट विनियोजन गरेको मैले पाएको छु, यसरी समृद्ध नगर बन्दैन ।
६) समग्र एक वर्षको उपलब्धिलाई १० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
– एक वर्षमा केही कामको थालनीमात्र गर्न नगरपालिका सफल भएको छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकासको काम हुन सकेको छैन । राजस्व असुलीमा नगरपालिकाले सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । कृषिमा आधुनिक उपकरण वितरण गरिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा समानुपातिक वितरण प्रणालीको सिद्धान्तलाई अवलम्बनमा जोड दिनुपर्छ । कामको मूल्याङ्कनको आधारलाई हेर्दा मैले ३ नम्बर दिन्छु ।
दुग्ध किसानका पीडा सुन
२१ केजी चरेशसहित दुई पक्राउ